Netherlands inoremadza COVID-yekutsvaga app mushure mekuona kuti inobatsira Google kuunganidza zvakavanzika data
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Nhau dzeNetherlands » Netherlands inoremadza COVID-yekutsvaga app mushure mekuona kuti inobatsira Google kuunganidza zvakavanzika data
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Nhau dzeNetherlands • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vashandisi veApp data yakavanzika yakaunganidzwa nemamwe mapurogiramu Google inoisa nekumira pafoni yeApple
Iyo app inoshandisa Google Apple Kujekesa Notification (GAEN) fomati
Chechitatu-bato maapplication haafanire kuve neanowana maapp app
CoronaMelder app haizotumire yambiro nezve zvingangoita hutachiona kwemazuva maviri
Ministry yeNetherlands yehutano, Welfare neMitambo yakazivisa kuti yakaremara yayo COVID-19 yekudyidzana-yekutsvagisa nharembozha mushure mekuonekwa kuti vashandisi zvakavanzika data zvakaunganidzwa nemamwe mapurogiramu Google anoisirwa nekumisikidza pafoni dzeApple.
Chirongwa cheCoronaMelder hachizotumire yambiro nezve zvinogona kutapukira kwemazuva maviri, rakadaro bazi rezvehutano, mushure mekudonha kwedata
App inoshandisa iyo Google Apple Ratidziro Yekuzivisa (GAEN) fomati - kungofanana nemamwe maapplication akafanana anoshandiswa muEU yose. Iyo inoshanda ichishandisa inogara ichichinja makodhi akagadzirwa zvisina kujairika akachinjaniswa pakati pefoni padhuze nepadhuze - uye inotumira yambiro kune avo vaisangana nemumwe munhu akazoedzwa aine COVID-19.
Chechitatu-bato maapplication haafanire kunge achiwana aya macode. Nekudaro, zvakazoitika kuti izvi hazvisizvo pamafoni eApple, uye maapplication akaisirwa nekusarudzika aive anokwanisa kwazvo kuverenga iyo data.
Mune chirevo, hurumende yakati uku kwaive 'kutyora mutemo wenguva pfupi pachirongwa chekuzivisa [che] COVID-19.' Iko kukanganisa kwakatanga kuwanikwa neE-wide eHealth Network ndokumhan'arirwa kuNetherlands muna Kubvumbi 22. Ongororo yakatangwa nguva pfupi yapfuura, zvichikurudzira Gurukota rezvehutano Hugo de Jonge kuti ambomisa chirongwa ichi, kunyangwe Google 'ichiratidza' kuti yainge yagadziriswa nyaya yacho.
Hurumende haisi kutora chero mikana, zvakadaro, ichisarudza kuona kuti nyaya yagadziriswa usati wabvumidza iyo app kutangazve kushanda. Ichashandisa mazuva maviri "kuferefeta kuti Google yakanyatso gadzirisa kuburitsa," chirevo chehushumiro chakaverengwa.
Sekureva kwaGoogle, dambudziko raive ne 'zvisingaoneki zvitupa zveBluetooth zvinoshandiswa neiyo Exposed Notification fomati' iyo yaive 'yakawanika kwenguva pfupi kune yakashomeka manyorerwo akaiswa-pamberi.' Yakataura zvakare kuti iyo data yakapihwa nevanozvizivisa 'pachavo haina kukosha kune vanoita zvakashata,' ichiwedzera kuti vechitatu-bato maapplication vashanduri vangangodaro vaisaziva kuti data raivepo.
Google yakavimbisawo kuti gadziriso ichave 'kuwanikwa kune vese vashandisi veApple mumazuva anotevera.' Iwo maDutch app akange atorwa pasi nevanhu 4,810,591 27 kubva muna Kubvumbi XNUMX, maererano newebhusaiti yayo.